डा. केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम कायमै, समर्थनमा प्रदर्शन बाक्लिँदै – Health Post Nepal
डा. केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम कायमै, समर्थनमा प्रदर्शन बाक्लिँदै
२०७५ माघ ७ गते २१:५२
१३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई आइसियूबाट जनरल वार्डमा सारिए पनि स्वास्थ्य जोखिम भने कायमै रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । डा. केसीको मुटुको चालमा अनियमितता कायमै छ भने लामो समयमो खाना अभावका कारण शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा घट्नाले जोखिम बढिरहेको छ ।
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउँदा कुनै पनि वेला संक्रमण हुन सक्ने र मुटु, मिर्गौलालगायत शरीरका प्रमुख अंगले जुनसुकै वेला काम गर्न छोड्ने जोखि यथावत् नै रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, निमोनियाको संक्रमण भने नसाबाट दिइएको एन्टिबायोटिक्सका कारण क्रमिक रूपमा नियन्त्रणमा आइरहेको उपचारमा उपचारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. सुवासप्रसाद आचार्यले जनाएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय डा. केसीको प्रेसरको अवस्था पनि सामान्य छ । कृत्रिम रूपमा दिइएको अक्सिजनले केसीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रालाई समेत सन्तुलनमा ल्याएको छ ।
समर्थनमा न्याम्सका चिकित्सक, कालोपट्टीमा सेवा दिँदै
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका आवासीय चिकित्सकले सोमबारदेखि कालोपट्टी लगाएर बिरामीको उपचार गरेका छन् ।
चिकित्साशिक्षामा आमूल सुधारसम्बन्धमा अघिल्लो अनशनका क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै १६औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसियन अफ न्याम्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको माग सम्बोधनमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको भन्दै कालोपट्टी बाँधेर सेवा गर्ने बताएको हो । केसीका माग छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन नगरिए एसोसिएसनले विरोधका अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेसमेत विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराइएको छ ।
मैनबत्ती बालेर खोजियो सरकारको नैतिकता
डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी त्यसविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तापक्ष नै लागिपरेको भन्दै सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले सोमबार मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएको छ । सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्नेलगायत माग राखी १३ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीका समर्थक तथा चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ताहरूले साँझ ६ बजे नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटेलअगाडि सरकारको नैतिकता खोज्न सांकेतिक रूपमा मैनबत्ती बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
डा. केसीसँग आफैँले गरेको सम्झौताबाट पछि हटेर सरकारले नैतिकता र विश्वसनीयता गुमाएको भन्दै उनीहरूले मैनबत्तीसहित नीतिवान् सरकारको खोजी, नागरिकमुखी सरकारको खोजी, नागरिकमुखी ऐनको खोजी, न्यायको खोजी, समाजवादको खोजी लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । अलायन्सका अभियन्ता प्रीतम सुवेदीले आफ्नै सम्झौताविपरीत नाफामुखी निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा ऐन ल्याउन खोजेकाले सरकारको नैतिकता खोज्नुपरेको बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजलाई पक्षपोषण गर्ने गरी विधेयक पास गर्न खोज्ने सरकारको नैतिकता र समाजवादउन्मुख नीति अँध्यारोमा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।
आवासीय चिकित्सकको प्रदर्शन मंगलबारदेखि
यसैबीच डा. केसीको समर्थनमा नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसन (एनआरडिए)ले मंगलबारदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
एनआरडिए चिकित्सकहरूले आइतबारका लागि तय गरेको एक घण्टे शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम प्रहरीले झडपको स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका कारण स्थगित भएको थियो ।
डा. केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै त्रिविका रेजिडेन्ट डाक्टहरूले आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिँदै आएकोमा भोलिदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने डा. सुमित पाण्डेले बताए ।